နှစ်သီးစား စစ်တပ်က မိုးကျရွှေကိုယ်တွေ.. ဒီတိုင်းပြည်မှ မမွဲရင် … ဘယ်တိုင်းပြည် ခံနိုင်မလဲ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« BC Documentary: Visions of the Future – The Intelligence Revolution
LOOK…How Islamic Malaysia value its minority Indian Hindus »
နှစ်သီးစား စစ်တပ်က မိုးကျရွှေကိုယ်တွေ.. ဒီတိုင်းပြည်မှ မမွဲရင် … ဘယ်တိုင်းပြည် ခံနိုင်မလဲ
စည်ပင် သာယာ ဌာနကို ပြည်သူက အခွန်ပေးရတယ်။
လမ်းခင်းတော့ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ။ မြောင်းရှင်းတော့ စနေနေ့တိုင်း လုပ်အားပေး။ အဘတွေ ဖဲကြိုး လာဖြတ်မှာမို့လို့ … ဟိုနေရာပြင်၊ ဒီနေရာမွန်းမံ လုပ်အားပေး။
အစိုးရကို ပြည်သူက အခွန်ပေးရတယ်။
အချိန်တန် အစိုးရဝန်ထမ်း ရာထူးကြီးတွေကို နှစ်သီးစား စစ်တပ်က မိုးကျရွှေကိုယ်တွေက လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဘာမှ မတတ်ဘဲ … အနိုင်ကျင့်ပြီး ဝင်လာတယ်။ ရာထူးတိုးဖို့ စောင့်နေရတဲ့ သာမန် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေက ဘာမှ နားမလည်တဲ့ မိုးကျရွှေကိုယ်တွေ စိတ်ကူးယဉ် လုပ်တာကို ခေါင်းငြိမ့် နားထောင်နေရတယ်။
တောထဲမှာ လမ်းရှင်းဖို့၊ အထုတ်သယ်ဖို့ ပေါ်တာဆွဲခံရတော့ သာမန်ပြည်သူတွေ။ အဲဒီ ပြည်သူတွေရဲ့ လစာတွေကို စားနေတာက ပေါ်တာဆွဲသူတွေ။ ပိုက်ဆံလည်းယူတယ်။ ပြီးတော့ ပြည်သူတွေကို ခေါင်းလည်း ခေါက်တယ်။ ဒါတင် အားမရသေးလို့ နောက်ကျောကို ဖနောင့်နဲ့ပါ နှစ်ချက်လောက် ဆင့်ပြီး ကန်လိုက်သေးတယ်။
ဒီတိုင်းပြည်မှ မမွဲရင် … ဘယ်တိုင်းပြည် ခံနိုင်မလဲ …။ ဒီတိုင်းပြည်မှ ဒုက္ခတွေ တလှေကြီး မရရင် ဘယ်တိုင်းပြည် ဒုက္ခရောက်ပါ့မလဲ။
ဒီနေ့အထိ … အဲဒီ အကျင့်ဆိုးတွေ ရှိနေသေးလား ဆိုတာကတော့ … ပြည်သူတွေ အသိဆုံးပါပဲ။
(ကိုထိုက်) Aung Michel
This entry was posted on October 31, 2013 at 9:36 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.